HomeAfaan OromooDiina Bobaa Jalaa: Shira Abiy fii Daba OPDO
Guddisaa Mul’ataa, Ammajjii 20, 2020
Uummanni Oromoo sirna jireenyaa fii bulchinsa ofii qabaachuunsaa beekkamaa dha. Uummatoota addunyaa keessaa sabni hawaasummaa, siyaasaa, qabeenya fii ilaalchaan yeroo dheeraaf ofdanda’e jiraachaa ture Oromoo dha. Oromiyaa, dachee badhaatuu fii lalistuu irratti sirna jireenya, bulchinsa, fii ilaalcha ammayyaa addadurummann bara dhibbaatamaaf qabaachuun kennaa uumaa ti.
Yeroo keessa uummata qananii, jaalalaan, nagaan nama fii uumama wajjin jiraatu kana diinni gargaarsa humnoota addunyaa dabalatee irratti bobba’uudhaan cabsee gabroomse.
Diina fonqolchee waan dhabe deeffachuuf, Oromoon waggoota dhibbaa ol qabsotti jira. Ilmaan Oromoo uummata keenya salphina gabrummaa jalaa baasanii bilisummaa gonfachiisuuf jireenya qananii saanii dhiisani qabsoo irratti diinaan falmaa lubbuu saanii wareegaa as ga’aniiru.
Ammasuma, dhalootaan Oromoo ta’anii diina wajjin dhaabbachuun kan uummata keenya gara-jabeenya fii hammenyaan miidhan hedduu dha. Qaama akkasii keessa tokko OPDO dha.
Maraammartoo Siyaasaa: OPDO/ODP Hardhaaf Kaleessa
Cunqursa, saamicha, hidhaa, daraarama, fii ajjeechaa mootummaa Wayyaaneen ilmaan Oromoo irra ga’aa ture harka OPDO-tiini. Waggoota lama dura, Qarree fii Qeerroon Oromiyaa kutannoo, tokkummaa fii gootummaan harka duwwaa mootummaa TPLF kuffisaniiru.
Laaffina ijaarsota Orommoo fii hanqina ijaaramuu Qarree fii Qeerroon kan ka’e, qabsichi milkiin xummuramuu hindandeenye. Sababa Kanaan kan ka’e, OPDOn ofirra garagaltee, dhiifama gaafattee, dhimma Oromoon tarkaanfachiisa jettee kakattee, masaraa mootummaa dhuunfatte.
Qaamni diina wajjin dhaabbatee uummata irratti bobba’e, silaas diinuma. OPDOn afaaniin kakattullee, amalli bare hingadhiifne. Dhalootumarraa OPDOn kan uumamte diina tajaajiluu fi. Abbaan ishii uummate irraa godaannaan, ooltee-bultee ofumaafuu diina hangafa taate. Oftaatee waan hinuumamne fii sabboonummaa Oromoo waan hinqabneef gooftaa biraa, nafxanyaatti galte. Nafxanyaanis meeshaa kana dhimma itti bayee Oromiyaa dhuunfachuuf miseensa itti naqatee, achumaan dhuunfate. Dhumarra maqaa Oromoo ofirraa gattee, nafxanyaan dhaalamtee Oromoo ficisiisaa, Oromiyaa fudhachiisaa jirti. Tuutni Oromoon garabaldhinaan dhiifama godheefii carraa lammaffaa kenneef kun, dabaashiitti deebitee uummata keenya galaafachaa jirti. Abiy Ahmed adda-durummaan itti-gaafatamaa daba kanaatti!
Diinummaa Abiy Ahmed: Akeeka Oromoo Balleessuu
OPDO bifa lamatu Oromoo irratti duulaa jira. Tokko, namoota Oromummaa gatanii garaaf bitaman. Kan biraa, nafxanyoota fakkeessanii Oromootti makamanii Oromummaarratti duulan. Qamarri uumama OPDO kan duraa Oromoo dadhabsiisanii Wayyaanee tajaajiluuf ture. Ammammoo Oromoo balleessuu fii nafxanyaa Oromiyaa dhuunfachiisuufi. Dhumarra, ifumatti maqaa Oromoo ofirraa haqanii nafxanyummaa fudhataniiru. Qaama kana ifatti ijaaree, hidhachiisee, qabeenya dhangalaasee, hamileessee Oromoo irratti bobbaasee, oromummaa balleessuuf kan duulchisaa jiru, Abiy Ahmedi.
Shira Abiy Ahmed: Karoora Oromiyaa Dhabamsiisuu
Abiy Ahmed, karaa tokko nafxanyoota masaraa minilikitii walitti qabee ijaaree hamilee jabeessaa; taayitaa bulchinsaa, waraanaa fii nageenyaa harka kaayee bobbaasaa jira. Karaa biraa, kan danda’e horiin bitaa, kan didan doorsisaa fii mana hidhaatti naqaa hawaasummaa Oromoo diigaa jira. Walumaa-gala, sabboonummaan Oromoo diinasaa akka ta’e ifatti labsee, Oromiyaa Komand Post-ii jala galchee sabboontota ficcisiisaa, nafxanyaan akka Oromiyaa dhuunfatuu haala aanjessee bobbaasaa jira.
Kanaafuu, oromoon Abiy fii OPDO/ODP/Bilxiginaa irraa badii malee waanti abdatu waan hinjirreef, diinota kana ofirraa fageessee, tokkummaa fii humna ofii jabeeffatee amma kaayyoon keenya galma gawutti kutannoodhaan qabsoo itti fufuu qaba.